သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်း၏ အရှုပ်အထွေးများ | Ensure
သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်း၏ အရှုပ်အထွေးများ
အလိုအလျောက် ကြွက်သားဆုံးရှုံးလာခြင်း Sarcopenia သည် အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပစ္စည်းများ မတင်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးသော အရိုးစု ကြွက်သား ဆုံးရှုံးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အာရုံကြောနှင့် လေဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြွက်သား၏ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပမာဏ လျှော့ကျလာသည့် ကြွက်သားချိလာခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဘဝရွေးချယ်မှုများနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေတို့ကြောင့် ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အချက်မျိုး မရှိသောကြောင့် ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု ရယူရန် ရှုပ်ထွေးနေရခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အောက်ပါ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရောဂါကြောင့် အိပ်ယာထဲလဲခြင်း
လှုပ်ရှားမှု မရှိနိုင်လောက်သည့် မတော်တဆမှု
စွဲသုံးသည့် ဆေးဝါးမှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
အလိုအလျောက် ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းသည် လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို၊ မဖြစ်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် အဆိုပါအခြေအနေကြောင့် သင်၏ လှုပ်ရှားမှု လျော့နည်းလာမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တွေ့ဆုံပြီး မိမိတွင် အဆိုပါ ရောဂါရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ အစားအသောက် ပုံစံသည် အဘယ်သို့နည်း။ ငယ်စဉ်က ဘာတွေ စားပြီး ဘာတွေ မစားခဲ့လဲ? ငယ်ရွယ်စဉ် ခန္ဓာကိုယ်သည် ပြန်လည်နာလန်ထူမြန်နှုန်း ကြောင့်အဆိုပါ အချက်ကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်လာသည်ကို သတိပြုမိလာလိမ့်မည်။ ယခင်က သင့်တွင် နာမကျန်းမှု၊ ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းများကို လှုပ်ရှားရသည့်အခါ အားစိုက်ရန်လိုပြီး အဆိုပါ အချက်သည်လည်း ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်အရွယ်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ နေ့စဉ်ဘဝတွင် ခွန်အားစိုက်ရန် လိုအပ်လာသည်။ အိပ်ယာမှ ထပြီး အိမ်သာသို့သွားခြင်း၊ လှေကားတက်ခြင်းတို့သည် သင့် အတွက် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်စေတော့ဘဲ တခြားသူ အကူအညီယူခြင်း တွေပါလိုအပ်လာတာမျိုး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်းသည် ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် တူညီပြီး တက်တက်ကြွကြွ မရှိတော့ပါ။
အခက်အခဲများ၊ သင့်အနေနှင့် ဂရုစိုက်ရန်အချက်များ?
အကူခေါ်ပါ– ကြွက်သား ရုတ်တရက် အားနည်းလာပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေနှင့် အမြင်မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး (သို့) အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုတည်းသာ လှုပ်၍မရခြင်း စသည့် အခြေအနေများ ကြုံတွေ့လာရသည်။ ၎င်းသည် လေဖြတ်ခြင်း၏ အစဖြစ်သည်။
အစာစားချင်စိတ်– အစာစားချင်စိတ် လျော့နည်းလာခြင်းသည် ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သင့်တွင် အားအင်ကုန်ခမ်းလာသည်ဟု ခံစားရပါက သင့်အစားအစာကို စစ်ဆေးပါ။ တစ်နေ့တာအတွက် လုံလောက်သော အာဟာရဓာတ်ကို ရနေပါရဲ့လား? ပုံမှန်သင်နှစ်သက်သော အစားအစာများသည် ယခုအခါတွင် ရိုးနေပြီလား? ထိုသို့ဆိုလျှင် အပြင်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်၍ ထိထိရောက်ရောက်ကုသနိုင်ရန် ကျန်းမာရေး ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးချက်များ- ကြွက်သားလျော့လာခြင်းနှင့်အတူ သင့်အနေနှင့် ဟန်ချက်ထိန်းရန် ခက်ခဲခြင်းကို ခံစားလာရမည်။ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားပေါ်မူတည်၍ wheelchair နှင့် အခြား အထောက်အကူ ပစ္စည်းများ လိုအပ်လာနိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်ရ ခက်ခြင်းအပြင် ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်းသည် သင့်၏ အစားအသောက် မြိုချခြင်းနှင့် အသက်ရှူခြင်းကိုပါ ထိခိုက်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာများသည်လည်း ကြွက်သားလိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြွက်သားဆုံးရှုံးသည် ဖြစ်စေ၊ မဆုံးရှုံးသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ရှိနိုင်၍ ဆရာဝန်နှင့် ပြနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင့်အနေနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အခြားအခက်အခဲများမှာ-
ပြုတ်ကျခြင်း၊ အရိုးကျိုးရန် လွယ်ကူခြင်း
ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း
အိပ်ယာမှ ထထခြင်း ၁ နာရီထက်ပို၍ တောင့်တင်းခြင်း၊ လှုပ်ရှားနိုင်မှု မရှိခြင်း
ထိခိုက်ထားသည့်နေရာများနှင့် အဆစ်တို့မှ ယောင်ယမ်းခြင်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ– ဒါပေါ့၊ သင်ဟာ သင့်အသက် ၂၀ လောက်ကလိုတော့ မသန်မာနိုင်တော့ပါဘူး၊ အသက်ကြီးလေ အားနည်းလာလေပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက် စိုးရိမ်တာက ထိုင်ခုံမှာပဲ ထိုင်ပြီး အစောင့်ရှောက်ခံနေရတာမျိုးကို ဖြစ်သည်။ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်တော့တာ၊ အကူအညီကင်းမဲ့တာတို့မှ စိတ်ကျရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။ အသိအမြင် ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် စိတ်ကျမှုတို့သည် ပြုသူ၊ ခံရသူအစရှိသလို ၂ ဦးနှစ်ဖက် နစ်နာစေသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာခြင်းကို ရပ်တန့်၍ မရပေမယ့် အဆင်ပြေပြေ အရွယ်ရောက်လာအောင် အားထုတ်နိုင်သည်။ ပြည့်စုံမျှတသည့် အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး ချစ်ခင်သူများ၏ အားပေးထောက်ပံ့မှုတို့မှသည် အစောပိုင်း ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုနှင့် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။